Haody : manakanto lian-kanto… | NewsMada
Haody : manakanto lian-kanto…
… Ka tsy izay anie ny olana e ! Ny famaritana ny kanto mihitsy no samihafa. Mety ho liana amin-javatra kanto ihany ny mpanakanto, fa tena kanto tokoa ve ilay mahaliana ? Fanontaniana saro-baliana ireo, saingy mety ho azo ihany raha manana fahasahiana mamaritra ny atao hoe « kanto » ny tsirairay.
Mety ho azo hamaritana ny kanto ihany, angamba, ny fomba amam-panao… Saingy tsy azo hadinoina fa marobe ihany koa ny Malagasy efa tsy mahalala intsony ny fombany. Vokany, hiova hanaraka izay tsy fahalalana izay ny famaritana ny kanto.
… Fomban’ny Malagasy, ohatra, ny miolaka raha miteny, saingy tsy kanto intsony « hono » ny hira na tononkalo, sns, miolaka fa aleo tonga dia vantanina ! Kanto ve ny tahaka izany sa tsia ? Anjaran’ny tsirairay ny mamaly io fanontaniana io.
Mompera Fitiavana Nonne: « Avoahy ny depiote Hasimpirenena » 21/01/2020
Lasan’ny IRK avokoa ny biraon’ny filankevitra 21/01/2020
Fametrahana ny mangarahara: hihaona isam-bolana ny filoha sy ny mpanao gazety 21/01/2020
Tsy azo an-telefaonina nefa nisy asa maika: nesorina amin’ny toerany ny lehiben’ny mpamonjy voina 21/01/2020
MDN: tsy adidin’olon-tokana ny fiarovana ny tontolo iainana 21/01/2020